Imo steeti: Okorocha ọ pụrụ imeli ọgọ ya Gọvanọ? - BBC News Ìgbò
Imo steeti: Okorocha ọ pụrụ imeli ọgọ ya Gọvanọ?
Nkenke aha onyonyo Rochas Okorocha nọ n'agba nke abụọ dịka Gọvanọ Imo steeti
Gọvanọ Imo steeti bụ Rochas Okorocha ekwuola kwusie ike na ọ bụ Uche Nwosu bụ di nwa ya nwaanyị ga-abụ onye ga-anọchi anya ya dịka Gọvanọ steeti ahụ ma ya pụọ n'ọchịchị.
Nwosu kwere ndị Imo steeti nkwa na ọ gaghi ekwe ka nna ya ukwu chịa ya dịka ọ bụ omenaala na Naijiria na onye emere eze na-efe onye mere ya eze.
Okorocha kwuru na okpuru ọchịchị iri abụọ na anọ n'ime iri abụọ na asaa dị na steeti ahụ kwadoro ebunauche ya ahụ.
Mana ụfọdụ na-ekwụ ihe ndị Okorocha mere kemgbe ọ chịwara bụ ihe ga-akwada ọgọ ya.
Kemgbe afọ 2015 Owelle Rochas Okorocha banyere ọchịchị nke ugbo abụọ, ọ bụ ọsọ ndị, owe ndị n'Imo steeti maka ọchịchị ya.
'Baba oyoyo' ọ pụtara 'Baba bịa ọzọ'?
Nke a bụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na ọchịchị ya achịtaghị aja ọbụla n'Imo steeti n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ na steeti ahụ na-ebe akwa ụgwọọnwa ha.
Ndị lara ezumike nka, ndị ọkaikpe, ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ ndị gunyere ndị a chụrụ achụ emegidela ngagharị iwe, ike agwụ ha.
Mana oge ọbụla, ọ bụrụ na ọ naghị akpụ mmadụ, ị mara na ọ na-eme mmemme nkwarị otu ebe maọbụ ebe ọzọ.
Otu ihe mmadụ niile kwekọritara bụ na ndu na-atọ Okorocha ụtọ mana o chekwara na ndụ na-atọ ndụ ọ na-chị ụtọ?
Ogbochi isii dịrị Okoroocha na imezu ebunauche ya
Tupu Okorocha enwe ike imeli ọgọ ya gọvanọ Imo steeti, o nwere ọtụtụ mmiri ọ ga-egwu na ugwu ọ ga-arị. Ha gụnyere:
1: Ufodụ na-ekwu na o mere Imo steeti ka ọ bụ akụ ezinaụlọ ya site na otu o siri eke ọrụ na steeti ahụ.
Uche Nwosu bụ dị nwa ya nwaanyi onye ọ na-agba mbọ ka ọ nọchie ya dịka gọvanọ bụ ọnyeisi ọrụ nke a kpọrọ Chief of Staff, nke steeti Imo.
Okorocha meree nwanne ya nwaanyi bụ Ogechi Ololo, Kọmishọna na-ahụ maka aṅụrị.
2: Ọgbaghara dị na APC
Otu pati ya bụ APC nwere ọgbaraghara n'etiti na steeti ahụ. Ụfọdụ ndị nọ na pati APC n'Imo steeti ekwenyeghị n'ihe Okorocha chọrọ iji akaa ya họpụta onye ga-achị steeti ahụ.
Dika o si aga, osote Govanọ bụ Prince Eze Madumere onye sokwa n'otu APC ekwupụtala mmasị ya ịzọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ.
3: Ndị Okorocha mejọrọ Karịrị akarị
Ọtụtụ ndị Okorocha mejọrọ anaghị ekwe ka a kpọta ha ya ma ya fọdụ ikwụnyere onye ọ họpụtara nọ ọchịchị. ha gụnyere
Ndị na-azụbu ahịa n' ahịa Ekeukwu dị na Owere ebe ndị uweojii gbagburu otu nwata nwoke oge ha na-agbali egbe elu iji gbasa ndị mmadụ mgbe a na-emebi ahịa ahụ. ndị ọzọ bụ ndị ọrụ oyibo ndị a na-eji ụgwọ ọnwa
4: Ebubo na Okoroocha na-emefu ego n'ihe adịghị mkpa Ịkpụ nkwu ndị a na-enyo enyo
Okoroọcha kpụrụ akpụrụakpụ Jacob Zuma onyebụbu onyeisiala Saut-Afrika nke achụturu n'ọchịchị maka mmerụaka.
Ihe dịka idozi ihe Ekeresimesi, ime achịcha bekee ịrị abụọ na anọ maka ncheta ụbọchị ọmụmụ ya.
5: Ndị ụka Katolik akwadoghị ebumnuche ya.
Na nsonso, Bishop Ọbinna nke Owere Katolik Diocese katọrọ nkata Okoroocha na-akpa ime ọgọ ya Gọvanọ, nke mere ka ndị otu Okoroocha palite obere ọgbaghara ebe ọ na-aka ụka. Agwa yiri ihe ndị otu Ikedi Ohakim mere nke mere ka ịzọ Okwa gọvanọ nke agba nke abụọị danye na mmiri.
6: Anya ndị ọzọ nwere agba na steeti ahụ nọ na pati ndị ọzọ dịkwa n'ọkwa Gọvanọ.
Ndị dịka Senator Ifeanyi Araraume nke PDP chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ na- ekwu na agaghị ahapụrụ otu onye steeti ka ọ na-ekwu ihe na-eme na ya.
mana na mkparịta ụka ya na BBC igbo nwere na nsonso, ọkwuru na Uche Nwosu tozuru etozu ịzọ Govanọ ma nwekwa nkwado okpuru ọchịchị iri abụọ na anọ n'ime ịrị abụọọ na asaa nke steeti ahụ. O kwukwara na Chineka kwadoro ya.
Otu ọkacharamara n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị sị aga na Naijiria bụ Barr. Collins Okeke kwuru na ọ bụ sọọsọ ndị Imo ga-ekwuli onye ga achị ha.
"Ọ bughị Rochas ga-ekwu onye ga-achị Imo Steeti. Ọ bụ ndị Imo steeti ka ọ dịrị. Ọ bụrụ na ha kpọọ ya ọrụ, ihe Rochas na-ekwu bụ ebunobi ya."
Onitsha tanker fire: 'Ọnịcha kwesiri inwe ezigbo ndị ọrụ mmenyụ ọkụ' - Obi Onitsha
'Enweghị ntiwapụ ọrịa Monkeypox na Naijirịa' - NCDC
Jurgen Klopp na-agbara ndị Man Utd egbe ọnụ